Fahad Yaasiin: Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo damiintay rag Shabaabnimo loo xiray… – Hagaag.com
Fahad Yaasiin: Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo damiintay rag Shabaabnimo loo xiray…
Posted on 15 Abriil 2019 by Admin in National // 0 Comments
Sii hayaha xilka Taliyaha NISA ahna Taliye kuxigeenka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo shalay ka hor-hadlayay Kulanka Baarlamaanka ayaa sheegay in 39% ay jiraan Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka 10aad ay damiinteen rag Al-Shabaab ahaan loo soo xiray.
Agaasime kuxigeenka oo su’aalo lagu weydiiyay kulanka Amniga ee Baarlamaanka ayaa sheegay inay jiraan Rag Al-Shabaab ahaa oo ay damiinteen Xildhibaanada oo dib ugu laabtay Al-Shabaab, isagoo xusay in haddii la daba geli lahaa aan Xildhibaanka loo yeeri karin, maadaama uu xasaanad leeyahay.
Waxaa uu sheegay in si wax looga qabto arrimaha Amniga loo baahan yahay in la meel mariyo sharciyo muhiim ah oo hor-yaala Baarlamaanka.
Baarlamaanka Federaalka ayaa illaa iyo hadda meel marin sharciyada la dagaalanka Argagixisada iyo Sharciga Xakameynta Hubka oo horay u soo meel mariyeen Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya.
Xildhibaan Zakariye Gaashaan ayaa weydiiyay mid ka mid ah su’aalihii ugu kululaa, taasoo uu ka carooday Taliye kuxigeenka, kana dalbaday inuu raalli gelin ka bixiyo, maadaama su’aal shaqsi ah uu weydiiyay, hase ahaatee uu Xildhibaanka markii dambe diiday.
Kulankii shalay looga hadlayay amniga ee uu yeeshay Baarlamaanka ayaa su’aalo lagu weydiiyay Wasiirada Gaashaandhigga, Amniga, Taliyeyaasha Ciidamada, iyadoo su’aalaha ugu badan uu ka jawaabay Sii hayaha Taliyaha NISA Fahad Yaasiin oo ah nin aan inta badan fagaarayaasha ka soo muuqan, iyadoo tagitaankiisa Baarlamaanka ahaa arrin aad loo hadal hayay.